Ukubuyekezwa Kontanga Ngokushesha Nokuvulekile - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu I-AfricArXiv on I-15th Septhemba 2020 I-15th Septhemba 2020
Yibuphi ubuchwepheshe obusha bokuhlolwa kwekhwalithi yocwaningo ekushicileleni kwezemfundo ngokukhanya kwe-Open Science?
Njengomnikelo ku Isonto Lokubuyekeza Kontanga 2020, I-TCC Africa futhi I-AfricArXiv bahlele i-webinar ukuthi ingene shi ekuthuthukisweni kobuchwepheshe obusha obheke eRepid and Open Peer Review. Ngaphezu kokushicilelwa okungama-300 (iziqalo kanye nezindatshana zephephabhuku) kuyatholakala ku-inthanethi kuchazwa Ucwaningo lwe-COVID-19 e-Afrika kanye nase-Afrika(https://www.scienceopen.com/collection/COVID19_Africa). Yiziphi izinqubo zokuhlola lezi zifundo ngokunemba nangokuhambisana ukuze izintatheli, abenzi bomgomo kanye nabantu abanentshisekelo bangafunda kubo futhi balwe negciwane?
Imibuzo ezophendulwa ngesikhathi se-webinar ifaka phakathi:
Yibuphi ubuchwepheshe obusha bokubuyekezwa kontanga okuvulekile nokusheshayo ekushicilelweni kwezifundo?
Ukubuyekezwa kontanga okuvulekile kuthuthukisa kanjani ukuhlolwa kwekhwalithi phakathi kocwaningo lwe-COVID-19
Yiziphi izikhuthazo ezikhona zabaphenyi zokuhlola imiphumela yabanye abacwaningi?
Ochwepheshe abangewona abafundi bangahlanganyela kanjani ekubuyekezweni kontanga okuvulekile?
Mayelana Neviki Lokubuyekezwa Kontanga
IViki Lokubuyekeza Lontanga umcimbi waminyaka yonke womhlaba wonke wokugubha iqhaza elibalulekile elibukelwa ontanga ekulondolozeni ikhwalithi yesayensi. Lo mcimbi uhlanganisa abantu, izinhlangano, kanye nezinhlangano ezibophezele ekwabelaneni ngomlayezo ophakathi wokuthi ukubuyekezwa kontanga okuhle, noma ngabe yikuphi ukwakheka noma ukwakheka, kubalulekile ekuxhumaneni kwabafundi.
IViki Lokubuyekezwa Kontanga 2020 lenzeka ngoSepthemba 21 - 25, ebekelwe ingqikithi yokuthi “Thembela Ekubuyekezweni Kontanga”, kukhanya ukukhanya kokuthi inqubo yokubukeza ontanga isebenza kanjani nokuthi kungani isiza ukwakha ukwethembana ocwaningweni.
Funda kabanzi ku- https://peerreviewweek.wordpress.com/
Abaphenyi, abasebenza ngemitapo yolwazi, abahleli bamaphephabhuku nezinye izifundiswa ezinentshisekelo kanye nabantu abangafundile kubandakanya nezintatheli.
Sep 21, 2020 ngo-4pm GMT / UTC, 5pm WAT, 6PM CAT / SAST, 7pm EAT
Bhalisa ku- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vM9JpC35QqaNswNPfhN3aA
UStephanie Dawson, Isayensi Ivulekile
U-Antonio Tenorio Fornés, Isayensi Esabelwe
UDaniela Saderi, Ukubuka kabusha
UGabriele Marinello, Ama-Qeios
UDenis Bourguet, Umphakathi Wontanga Ku...
Categories:	IndawoVula UkufinyelelaVula iSayensiPublishingUkwethulwa
Tags: vula ukubuyekeza ngakunye
I-PLOS ne-TCC Africa Basebenzisana Ukusekela Abaphenyi Base-Afrika - AfricArXiv	· 19 uMeyi 2021 ngo-8: 23 ekuseni
[…] Isibuyekezo esisheshayo futhi esivulekile sontanga […]